China Fulvic Acid orinasa sy mpamatsy | Lemandou
Ny asidra Leonardite Fulvic Acid dia alaina avy amin'ny arina voanjo, lignite ary toetr'andro. Ny asidra fulvika dia singa karbonika fohy misy vatan'ny molekiola kely nalaina avy amin'ny asidra humic voajanahary. Io no ampahany tsy voavahan'ny rano amin'ny asidra humika manana ny lanjan'ny molekiola kely indrindra ary ny atiny misy vondrona avo indrindra. Izy io dia misy eo amin'ny natiora. Anisan'izany, ny tahan'ny asidra fulvika ao anaty tany no lehibe indrindra. Izy io dia mazàna mavesatra amin'ny lanjan'ny molekiola voajanahary, mavo, mavo ary mavo, amorphous, gelatinous, fatty ary aromatika polyelectrolytes, ary tsy azo asolo tena azy io.
Leonardite asidra fulvika
Asidra fulvika biolojika
Asidra Fulvic Biochemical
Ny asidra Fulvic Biochemical dia nalaina avy tamin'ny fanatobiana microbial ny fako, sarotra kokoa ny firafitra, ankoatry ny asidra hydroxycarboxylic manitra, misy karazan-gliosida mety solon'ny rano, asidra amine, proteinina, siramamy ary asidra asidra.
1. Hatsarao ny tany: ny asidra fulvika dia sakafon'ny zavamiaina bitika
Voakasiky ny fiasan'ny asidra fulvic io, dia afaka manova ny firafitry ny fiangonan'ny tany. Ny asidra fulvika dia misy vondrona vondrona miasa marobe, izay mifanerasera amin'ny vongan-tany mba hamorona agregaté izay manana habe sy firafitra azo antoka. Ny fahaizany mifanakalo molekiola dia eo anelanelan'ny 400-600me / 100g, ary ny fahafahan'ny fifanakalozana ion an'ny tany tsotra dia eo anelanelan'ny 10-20me / 100g fotsiny. "Izany hoe, aorian'ny fametahana ny asidra fulvika amin'ny tany, dia afaka mandray sy mifanakalo ary manafotra ny zezika apetaka ny asany ambonimbony, ary koa manova ny ampahany mivaingana amin'ny tany, avy amin'izay tsy azo totofana ny vokatra amin'ny alàlan'ny vokatra azo tsentsina noho ny voly. Amin'izany dia manatsara ny fampiasana otrikaina, izay tsy mitovy amin'ny zezika mahazatra. "
Ny asidra 2.Fulvic dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny zezika. Izy io dia azo ampiasaina ho toy ny maso miadana mandefa zezika azota, mampihetsi-po ny zezika fosfat, mpiasan'ny zezika potash mihetsika haingana, ary mpamboly zezika mikraoba.
Ny solontenan'ny zezika azota miadana, ny asidra fulvika dia misy vokany manakana ny anzima urea lo sy ny anzima simba ao anaty tany. Ny asidra fulvika dia afaka manakana ny famotehana ny urea mandritra ny fitomboan'ny vokatra, amin'izay hampihena ny volatilization ny urea. Manaporofo izany fa ny asidra fulvic dia misy vokany miadana. Ny mpikatroka zezika phosphate, ary ny antony mivantana manatsara ny fahombiazan'ny zezika phosfat dia ny asidra fulvic afaka mamorona asidra metaly-metaly-fosfat fôfat miaraka amina zezika phosphate, toy ny asidra fulvic vy, asidra fulvic aluminium, phosphore Acid rot , aorian'ny famolavolana sarotra toy izao, dia tsy vitan'ny manakana ny tany tsy hanamboatra fosforoka, fa hanamora ny fitrohana ny voly ihany koa, ka hampiakatra ny tahan'ny fampiasana zezika fosfor avy amin'ny 10% -20% hatramin'ny 28% -39 %.
3. Hatsarao ny fanoherana ny vokatra: fanoherana ny haintany, hatsiaka ary aretina, hampitombo ny vokatra, ary hanatsara ny kalitaon'ny vokatra
Ny asidra fulvic mineraly dia afaka mampihena ny tanjaky ny ravina zavamaniry ary mampihena ny fifindran'ny ravina, amin'izay mampihena ny fanjifana rano, manatsara ny toetran'ny zavamaniry, miantoka ny fitomboana sy ny fambolena voajanahary amin'ny toetr'andro, ary manatsara ny fanoherana ny haintany.
Manaraka: Humasy potasioma